Monday February 10, 2020 - 09:30:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Kenya ayaa sheegaya in markale weerar khasaara dhaliyay lagu qaaday goob ay dhismo ka wadeen shirkado ay leedahay dowladda Kenya.
sawirro cusub 2 gaari oo lagu gubay weerarka Lamu
Warbaahinta maxalliga ah ee Kenya ayaa sheegtay in dagaal xooggan uu shalay duleedka degmada Mpekatoni ku dhaxmaray xoogaga Al Shabaab iyo ciidamada Booliska Kenya.
Dagaalka oo ahaa mid culus ayaa sababay in ciidamada Booliska ay isaga firxadeen goobtii lagu dagaallamay waxaana xoogaga weerarka geystay usuurta gashay in ay qabsadaan gaadiid ay la haayeen shirkadaha Kenya ee xuduud beenaadka dhisa waloow markii dambe ay gubeen.
Irungu Macharia oo ah taliyaha booliska gobolka Lamu ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamadoodu ay dagaal lagaleen xoogag katirsan Al Shabaab, wuxuu carabaabay in ragga weerarka qaaday ay weerarka ku gubeen 2 gaari oo qeyb ka ahaa mashruuca dhismaha ee dowladda Kenya gacanta ku hayso.
illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin Al Shabaab oo ku saabsan dagaalkii cuslaa ee shalay ka dhacay gobolka Lamu, weerarkan ayaa imaanaya bil kadib markii uu dhacay weerarkii askarta Americanka ah lagu laayay ee ka dhacay isla gobolka Lamu.